Inkqubo yeeMagnetic Holding abavelisi kunye nababoneleli - China Inkqubo yokubamba Magnetic yeFektri
Kulula ukubeka kwaye ukubuyisa ophakamisa umazibuthe kwizinto eziyintsimbi ngesiphatho se-ON / OFF. Akukho mbane wongezelelweyo okanye amanye amandla afunekayo ukuqhuba esi sixhobo semagnethi.
Isixhobo esiSisigxina sikaMagnetic Hand Lifter sokuhambisa iipleyiti zensimbi
Isiphathamandla esisisigxina seMagnetic sikhethe kuphela ukusetyenziswa kweetafile zentsimbi ezityaliweyo kwimveliso yeeworkshop, ingakumbi amashiti amancinci kunye neenxalenye ezibukhali ezibukhali okanye ezinamafutha. Inkqubo ehlanganisiweyo yamagnetic inokubonelela nge-50KG yokulinganisa amandla okuphakamisa kunye ne-300KG Max yokukhupha amandla.
IYellow Pilot Ladder Magnet iphuhliswa ukwenza ubomi bukhuseleke kubaqhubi beenqwelomoya elwandle ngokunika amanqaku eankile asuswayo kumanqanaba akwicala lenqanawa.
Umtsalane wemagnethi ungabamba iziqwenga zentsimbi / zentsimbi okanye izinto zentsimbi kulwelo, umgubo okanye phakathi kweenkozo kunye / okanye iigranu, ezinjengokutsala izinto zentsimbi kwindawo yokuhlambela, ukwahlula uthuli lwentsimbi, iitshipsi zentsimbi kunye nokufakwa kwentsimbi kumaleyisi.
Umzingeli wemagnethi ojikelezayo wenzelwe ukutsala iinxalenye zentsimbi kwezinye izinto. Kulula ukwenza unxibelelwano olusezantsi iinxalenye zentsimbi, kwaye emva koko unyuse isiphatho ukulanda iinxalenye zentsimbi.
Esi sixhobo sokufumana imagnethi sitsala uxande sinokutsala iziqwenga zentsimbi nezesinyithi ezinje ngezikrufu, izikrufu, iinzipho, kunye nesinyithi esilahliweyo okanye izinto ezahlukileyo zentsimbi kunye nentsimbi kwezinye izinto.
Le ntaba yomeleleyo yemagnethi ilungele umpu, imipu, imipu, imipu, imipu kunye nemipu yazo zonke iimveliso ukufihla ekhaya okanye kwimoto ukuzikhusela, okanye kwimiboniso. Kulula kakhulu ukuyifaka ukuze uyicwangcise naphi na ngaphandle kwengxaki!
Le ntaba yomeleleyo yemagnethi ilungele umpu, imipu, imipu, imipu, imipu kunye nemipu yazo zonke iimveliso ukufihla ekhaya okanye kwimoto ukuzikhusela, okanye kwimiboniso. Ushicilelo lwe logo yakho ephezulu luyafumaneka apha.
Irabha eKhuselweyo yeMagnetic Base Mount Bracket yoBume beMoto ye-LED
Esi sibiyeli siphezulu semagnethi senzelwe uphahla lwemoto ukukhanya kwebar yokukhanyisa kunye nokuma. Isimbozo serabha esityunjiweyo ngumbono wokukhusela ukupeyinta imoto kumonakalo.
Iimagnethi zembiza yerabha zilungele ngokukodwa izinto ezizinzileyo zemagnethi ngomsonto wangaphandle njengokuboniswa kwentengiso okanye ukukhanya kwezokhuseleko kuphahla lwemoto. Irabha engaphandle inokukhusela umazibuthe wangaphakathi kumonakalo nakubungqina bomhlwa.